सारा नेपालीको लागी आयो खुसीको खबर।यति गते देखी लागू हुँदै - Nepali in Australia
June 8, 2021 autherLeaveaComment on सारा नेपालीको लागी आयो खुसीको खबर।यति गते देखी लागू हुँदै
काठमाडौं । सरकारले असारबाट निषेधाज्ञा हटाउन सक्ने देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा जेठभर लम्ब्याइएपनि खुकुलो पारेपछि त्यस्तो संकेत गरेको हो ।३१ जेठसम्म निषेधाशा लम्ब्याइएको छ । तर, यसपटक विगतमा छुट नदिइएका कतिपय व्यवसाय र यातायात निश्चित अवधिका लागि खोल्न छुट दिइएको छ ।
जसमा किराना पसल, डिमार्टमेन्टल स्टोल, खाद्यान्नका पसलका अलावा मालवाहक यातायात पनि छन् । सवारी साधन मर्मतका वर्कशप पनि खोल्न निश्चित अवधि राखेर छुट दिइएको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
जेठभर निषेधाज्ञा जारी गरेर खुकुलो पार्दै लाने र भाइरसको संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरी हटाउने तयारी समेत भएको छ । तर, संक्रमण कम नभएमा असारको एक साता निषेधाज्ञा थपिने बुझिएको छ ।
असार महिनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले पनि सरकारले निषेधाज्ञा लागू नगर्ने निश्चितप्रायः छ । असारमा कर तिर्ने महिनाका रुपमा व्यवसायीहरुले बुझ्ने गरेका छन्।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
भर्खरै राजेन्द्र महतोको घरमा हेर्नुस ! हेमराजले घर भित्रै छिरेर गाडे का’लो झण्डा, भयो भागाभाग, भिडियो हेर्नुहोस (सहि कि गलत ?)
Breaking News:कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछी,फेरि सम्पुर्ण बजार, बिधालय बन्द गर्ने घोषणा!